Howlgal lagu dilay Xubno ka tirsan Al-Shabaab | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Howlgal lagu dilay Xubno ka tirsan Al-Shabaab
Howlgal lagu dilay Xubno ka tirsan Al-Shabaab
War kasoo baxay taliska Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Dowladda a ka hortegeen qorshe ay Al-Shabaab ku doonayee inay weeraro kaga fuliyaan deegaano ka tirsan Gobolka Jubbada Hose.
Taliyaha Guutada 11aad qeybta 43aad ee ciidanka xoogga dallka Gaashaanle Sare Maxamed Badal Xasan oo la hadlay Warbaahinta Dowladda ayaa sheegay in ciidamada ay ka hortegeen Xubno ka tirsan Al-Shabaab oo qorsho amni darrow k waday qeybo ka mid ah degmada Jamaame ee Gobolkaas.
Waxaa uu intaasi ku saarey in howlgal qorsheysan oo ay ciidamada ka fuliyeen deegaannada Araare, Muuse Xaaji iyo kaban oo qiyaastii Degmada Jamaame ee Gobolka Jubbada Hoose u jirta 5 km lagu dilay tiro ka mid ah Al-Shabaab, halka kuwa kalena lagu dhaawacay was sida uu hadalka u dhigey.
Gaashaanle Sare Maxamed Badal Xasan ayaa xusay in ujeedka howlgalka uu ahaa markii ay ka war heleen dhaq dhaqaaq ay sameynayeen Al-Shabaab oo ahaa biyaha webiga oo ay ku soo fureen xaafado kala duwan, isagoo intaa ku daray inay ka hortegeen weeraro ay qorsheynayeen.
“Howlgalka qorsheysan ee ay ciidanka fuliyeen waxa uu noqday mid mira dhalay oo ay ciidanka ka fuliyeen meel qiyaastii 5 km u jirta Degmada Jamaame, Qorshaheena soo socda ayaa ah inaan fariisin ka dhigano Degmada Jilib ee Gobolka Jubbada Dhexe” ayuu yiri Taliyaha Guutada 11aad qeybta 43aad ee ciidanka xoogga dallka.
Si kastaba howlgalka la sheegay in Ciidamada Dowladda Soomaaliya ka fuliyeen Gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xili Maanta Ciidanka Dowladda iyo Al-Shabaab uu dagaal culus ku dhexmarey deegaanka Goof-Gaduud Buureey ee duleedka Baydhabo.